မြန်မာကိုစစ်လက်နက်တင်ပို့နေတဲ့ ဆားဘီးယား၊ ရုရှားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေအပေါ် ဥရောပ ပါလီမန်ရှုတ်ချလိုက်တာကို ထောက်ခံတယ်လို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ စစ်ရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေနဲ့ပါ ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
မြန်မာကိုစစ်လက်နက်တင်ပို့နေတဲ့ ဆားဘီးယား၊ ရုရှားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေအပေါ် ဥရောပ ပါလီမန်ရှုတ်ချလိုက်တာကို ထောက်ခံတယ်လို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကြာသာပတေးနေ့က ချမှတ်တဲ့ ဒီဥရောပပါလီမန်ဆုံးဖြတ်ချက်က မဖြစ်မနေ လိုက်နာဖို့ မလိုတာမျိုးမို့၊ ဒီထက် ပိုပြင်းထန် တင်းကြပ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချ လက်တွေ့တားမြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ပြောခွင့်ရက ဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းပြီး အရပ်သားတွေကိုပါ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာမူတွေအတွက် ဒီလက်နက်ပို့တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလည်း အပြစ်ရှိတဲ့ကြောင်း အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာနိုင်တာကို စစ်ရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေနဲ့ပါ ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ NUG အစိုးရရဲ့ ပြည်ထဲရေး နဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး နဲ့ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဒေသကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးလွင်ကိုလတ် က
ဦးလွင်ကိုလတ် (ဝန်ကြီး၊ NUG အစိုးရ ) ။. ။ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မှုဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ခုခံကာကွယ်နေတဲ့စစ်ကိုလည်း များစွာအထောက်အပန့်ဖြစ်မှာပါ။ သို့သော်လည်းပဲ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ Procedure တွေကို တဆင့်ချင်းဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ကိစ္စတွေက ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် နောက်တော့ နောက်ကျတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံတွေက စစ်ကောင်စီကို တောက်လျှောက် လိုအပ်တဲ့ လက်နက်တွေကို ရောင်းပေးနေတာတွေက အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ကြာခဲ့ပါပြီ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဒီ Impact က နောက်ထပ်ကာလလေးတခုမှာ သက်ရောက်လာမယ့်သဘောရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့အချေနေတခုတော့ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တွေ နဲ့တော့ အချိန်ကိုက်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အနေအထားတော့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့လည်း ကြိုဆိုပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါပေမယ့် ဆားဗီယားအနေနဲ့ မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ မနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတဝှိက်မှာပဲ ၈ဝ မမ ရောကက်ဒုံးကျည်တွေ ၂၅ဝဝ ကျော်ရောင်းခဲ့ပြီး အခုဆုံးဖြတ်တာကလည်း မဖြစ်မနေလိုက်နာဖို့ မလိုဘူးလို့ MITS ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မြန်မာ အင်စတီကျု့ က အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး က ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦး ( MITS) ။. ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေက မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် Biding Resolution မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ Moral authority ပေါ့။ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်ဖူးဆိုတဲ့အပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ Resolution ဖြစ်တော့ မလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာလည်း ဘာမှထူးထူးခြားခြားသက်ရောက်မှုတော့မရှိပါဘူး။ အရင်တုံးကလည်း မြန်မာပြည်ကို လက်နက်မရောင်းဖို့ ပြောဖူးတယ်။ ဒီ နဝတ၊နအဖ လက်ထက်တွေမှာ ပြောပေမယ့်လည်း ရောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ ရောင်းနေတာပဲပေါ့။ ဒီ Biding မရှိတဲ့အခါမှာပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါကို KNU ပြောခွင့်ရနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးအကြီးအကဲ ဖဒို စောတောနီး ကလည်း သဘောတူလိုက်ပြီး အခုလိုပြောပါတယ်။
ဖဒိုစောတောနီး (. KNU) ။. ။ ပထမဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရှုတ်ချလိုက်တာကတော့ ကျနော်တို့ ကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တာကတော့ ဒီထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ နောက်တချက်က အခုဖော်ပြတဲ့ နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုတ် ၊ ရုရှားနဲ့ ဆားဗီးယားတို့အပြင် တခြားမဖော်ပြသေးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်း ဒီမိုကရေစီ ဘာညာပြောပေမယ့် တကယ်တန်းကြတော့ ဒီနိုင်ငံတွေကပဲ ရောင်းပေးနေတာပဲ။ အဲဒါကြောင့် နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်း နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကနေပြီးတော့ ပိုပြီးတော့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦး ကတော့ အခုလို လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်လာရင်တောင် တချို့တိုက်ခိုက်မှုတွေ လျော့မသွားနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦး ( MITS) ။. ။ အခုနောက်ပိုင်း တပ်မတော်ဖက်က ဝယ်ယူတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေက များသောအားဖြင့် လေကြောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရော့ကက်လို့ဟာမျိုးတွေ ပိုများတယ်။ လေယာဉ်ကချတဲ့ဗုံးတွေက အများအားဖြင့်က ကပစ (ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး) က ဗုံးတွေ။ အဓိက သူတို့ဝယ်ယူရတဲ့ လက်နက်တွေကတော့ လေယာဉ်ပျံတွေ၊ ရဟတ်ယာဉ်တွေမှာ သုံးတဲ့ စက်သေနတ်ကြီးတွေပေါ့နော်။ အဲဒီက ကျည်တွေရယ်၊ လေယာဉ်တွေပေါ်ကပစ်တဲ့ ဒုံးပျံတွေပေါ့။ ၄ဝ မမ ၊ ၈၀ မမ ရော့ကက်တွေ ။ အခု လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် အဓိက အပြောင်းအလည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နေရာက လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနေရာတွေမှာပဲ အပြောင်းအလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကြည်းတပ်မှာကတော့ အပြောင်းအလည်းရှိဖုိ့က နည်းတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ အခုသုံးနေတဲ့ လက်နက်အများစုက ပြည်တွင်းထုတ်တွေပဲဖြစ်တယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ စစ်ကောင်စီ ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေကြရတဲ့ အပစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို ကူညီဖို့ နိုင်ငံတကာမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဖဒိုစောတောနီး က ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဖဒိုစောတောနီး (. KNU) ။. ။ ဒီလက်နက်တွေ ရောင်းပြီးတော့ ဒီလက်နက်တွေပဲ ကိုယ့်ပြည်သူလူထု့ပြန်သတ်တာလေ။ အဓိကလေကြောင်းက သုံးတဲ့လက်နက်တွေ လူထု့ကို ပစ်သွားတဲ့လက်နက်ကြီးတွေက သူကိုယ်ရောင်းပေးတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ဖို့များတယ်။ အဓိက သူတိုက်တဲ့ ရန်သူကိုမပစ်ပဲနဲ့ လူထုတွေကို လိုက်လိုက်ပစ်နေတာ။ ဒီထက်များပြားတဲ့ တင်းကြပ်တဲ့လက်နက်ပိတ်ပင်မှုတွေ တားမြစ်မှုတွေလုပ်ဖို့ အများကြီးမျှော်လင့်တယ်။ တကယ်တော့ အရင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာလည်း အလားတူဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး မနှစ် နှစ်လည်တုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တုံးက ဆားဗီးယားနိုင်ငံ က ထောက်ခံခဲ့ပေမယ် လက်နက်ရောင်းချမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ စစ်ရေးအကဲခတ်တွေက ထောက်ပြထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
စဈကောငျစီအပျေါ ပိုမိုဖိအားပေးဖို့ EU ကို မွနျမာ့အရေး လှုပျရှားသူတှတေိုကျတှနျး
မွနျမာကိုစဈလကျနကျတငျပို့နတေဲ့ ဆားဘီးယား၊ ရုရှားနဲ့ တရုတျနိုငျငံတှအေပျေါ ဥရောပ ပါလီမနျရှုတျခလြိုကျတာကို ထောကျခံတယျလို့ NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးက ပွောလိုကျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကွာသာပတေးနကေ့ ခမြှတျတဲ့ ဒီဥရောပပါလီမနျဆုံးဖွတျခကျြက မဖွဈမနေ လိုကျနာဖို့ မလိုတာမြိုးမို့၊ ဒီထကျ ပိုပွငျးထနျ တငျးကွပျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြိုးခြ လကျတှတေ့ားမွဈဖို့လိုတယျလို့ KNU ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံး ပွောခှငျ့ရက ဆိုလိုကျပါတယျ။
မွနျမာစဈအာဏာသိမျးပွီး အရပျသားတှကေိုပါ ပဈမှတျထားတိုကျခိုကျလာမူတှအေတှကျ ဒီလကျနကျပို့တဲ့ နိုငျငံတှမှောလညျး အပွဈရှိတဲ့ကွောငျး အခုလိုဆုံးဖွတျခကျြတှကွေောငျ့ ဘယျလိုဆကျဖွဈလာနိုငျတာကို စဈရေးလလေ့ာသုံးသပျသူတှနေဲ့ပါ ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ NUG အစိုးရရဲ့ ပွညျထဲရေး နဲ့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဝနျကွီး နဲ့ တောငျပိုငျးတိုငျး စဈဒသေကွီးကွပျရေးမှူး ဦးလှငျကိုလတျ က
ဦးလှငျကိုလတျ (ဝနျကွီး၊ NUG အစိုးရ ) ။. ။ ဒီလိုဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျမှုဟာ ကနြျောတို့ရဲ့ ခုခံကာကှယျနတေဲ့စဈကိုလညျး မြားစှာအထောကျအပနျ့ဖွဈမှာပါ။ သို့သျောလညျးပဲ နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးတှအေနနေဲ့ ဆောငျရှကျရတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ Procedure တှကေို တဆငျ့ခငျြးဖွတျကြျောနရေတဲ့ကိစ်စတှကေ ရှိနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ နောကျတော့ နောကျကတြယျလို့ ကနြျောထငျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီနိုငျငံတှကေ စဈကောငျစီကို တောကျလြှောကျ လိုအပျတဲ့ လကျနကျတှကေို ရောငျးပေးနတောတှကေ အခုမှမဟုတျပါဘူး။ ကွာခဲ့ပါပွီ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ ဒီ Impact က နောကျထပျကာလလေးတခုမှာ သကျရောကျလာမယျ့သဘောရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကောငျးတဲ့အခနြေတေခုတော့ရှိတယျ။ ကနြျောတို့ ပွညျသူခုခံတျောလှနျစဈတှေ နဲ့တော့ အခြိနျကိုကျဖွဈသှားနိုငျတဲ့ အနအေထားတော့ရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလို့လညျး ကွိုဆိုပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါပမေယျ့ ဆားဗီယားအနနေဲ့ မွနျမာစဈအာဏာသိမျးတဲ့ မနှဈ ဖဖေျောဝါရီလတဝှိကျမှာပဲ ၈ဝ မမ ရောကကျဒုံးကညျြတှေ ၂၅ဝဝ ကြျောရောငျးခဲ့ပွီး အခုဆုံးဖွတျတာကလညျး မဖွဈမနလေိုကျနာဖို့ မလိုဘူးလို့ MITS ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ မွနျမာ အငျစတီကြု့ က အမှုဆောငျညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာမငျးဇျောဦး က ဆိုပါတယျ။
ဒေါကျတာ မငျးဇျောဦး ( MITS) ။. ။ ဒီဆုံးဖွတျခကျြတှကေ မဖွဈမနလေိုကျနာရမယျ့ Biding Resolution မဟုတျပါဘူး။ နိုငျငံရေးအရ Moral authority ပေါ့။ မဖွဈသငျ့မဖွဈထိုကျဖူးဆိုတဲ့အပျေါမှုတညျပွီးတော့ Resolution ဖွဈတော့ မလိုကျနာတဲ့နိုငျငံတှအေပျေါမှာလညျး ဘာမှထူးထူးခွားခွားသကျရောကျမှုတော့မရှိပါဘူး။ အရငျတုံးကလညျး မွနျမာပွညျကို လကျနကျမရောငျးဖို့ ပွောဖူးတယျ။ ဒီ နဝတ၊နအဖ လကျထကျတှမှော ပွောပမေယျ့လညျး ရောငျးတဲ့နိုငျငံတှကေတော့ ရောငျးနတောပဲပေါ့။ ဒီ Biding မရှိတဲ့အခါမှာပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါကို KNU ပွောခှငျ့ရနဲ့ နိုငျငံခွားရေးအကွီးအကဲ ဖဒို စောတောနီး ကလညျး သဘောတူလိုကျပွီး အခုလိုပွောပါတယျ။
ဖဒိုစောတောနီး (. KNU) ။. ။ ပထမဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ ရှုတျခလြိုကျတာကတော့ ကနြျောတို့ ကွိုဆိုတာဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောတာကတော့ ဒီထကျပိုပွီး ပွငျးထနျတဲ့ အရေးယူမှုတှေ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခမြှတျလုပျဆောငျဖို့လိုအပျတယျ။ နောကျတခကျြက အခုဖျောပွတဲ့ နိုငျငံသုံးနိုငျငံဖွဈတဲ့ တရုတျ ၊ ရုရှားနဲ့ ဆားဗီးယားတို့အပွငျ တခွားမဖျောပွသေးတဲ့နိုငျငံတှလေညျး ဒီမိုကရစေီ ဘာညာပွောပမေယျ့ တကယျတနျးကွတော့ ဒီနိုငျငံတှကေပဲ ရောငျးပေးနတောပဲ။ အဲဒါကွောငျ့ နောကျထပျပါဝငျတဲ့နိုငျငံတှကေိုလညျး နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးကနပွေီးတော့ ပိုပွီးတော့ ဆကျလကျလုပျဆောငျသှားဖို့လိုအပျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒေါကျတာ မငျးဇျောဦး ကတော့ အခုလို လကျနကျပိတျဆို့မှုဖွဈလာရငျတောငျ တခြို့တိုကျခိုကျမှုတှေ လြော့မသှားနိုငျဘူးလို့ဆိုပါတယျ။
ဒေါကျတာ မငျးဇျောဦး ( MITS) ။. ။ အခုနောကျပိုငျး တပျမတျောဖကျက ဝယျယူတဲ့ လကျနကျခဲယမျးမီးကြောကျတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ လကွေောငျးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ရော့ကကျလို့ဟာမြိုးတှေ ပိုမြားတယျ။ လယောဉျကခတြဲ့ဗုံးတှကေ အမြားအားဖွငျ့က ကပစ (ကာကှယျရေးပစ်စညျးထုတျလုပျရေး) က ဗုံးတှေ။ အဓိက သူတို့ဝယျယူရတဲ့ လကျနကျတှကေတော့ လယောဉျပြံတှေ၊ ရဟတျယာဉျတှမှော သုံးတဲ့ စကျသနေတျကွီးတှပေေါ့နျော။ အဲဒီက ကညျြတှရေယျ၊ လယောဉျတှပေျေါကပဈတဲ့ ဒုံးပြံတှပေေါ့။ ၄ဝ မမ ၊ ၈၀ မမ ရော့ကကျတှေ ။ အခု လကျနကျပိတျဆို့မှုတှဖွေဈလာပွီဆိုရငျ အဓိက အပွောငျးအလညျးဖွဈသှားနိုငျတဲ့နရောက လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုနရောတှမှောပဲ အပွောငျးအလညျးဖွဈသှားနိုငျတယျ။ ကွညျးတပျမှာကတော့ အပွောငျးအလညျးရှိဖုိ့က နညျးတယျ။ ဘာလို့ဆိုတော့ အခုသုံးနတေဲ့ လကျနကျအမြားစုက ပွညျတှငျးထုတျတှပေဲဖွဈတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ စဈကောငျစီ ရဲ့တိုကျခိုကျခံနကွေရတဲ့ အပဈမဲ့ ပွညျသူတှကေို ကူညီဖို့ နိုငျငံတကာမှာ တာဝနျရှိတယျလို့ ဖဒိုစောတောနီး က ထောကျပွလိုကျပါတယျ။
ဖဒိုစောတောနီး (. KNU) ။. ။ ဒီလကျနကျတှေ ရောငျးပွီးတော့ ဒီလကျနကျတှပေဲ ကိုယျ့ပွညျသူလူထု့ပွနျသတျတာလေ။ အဓိကလကွေောငျးက သုံးတဲ့လကျနကျတှေ လူထု့ကို ပဈသှားတဲ့လကျနကျကွီးတှကေ သူကိုယျရောငျးပေးတဲ့လကျနကျတှဖွေဈဖို့မြားတယျ။ အဓိက သူတိုကျတဲ့ ရနျသူကိုမပဈပဲနဲ့ လူထုတှကေို လိုကျလိုကျပဈနတော။ ဒီထကျမြားပွားတဲ့ တငျးကွပျတဲ့လကျနကျပိတျပငျမှုတှေ တားမွဈမှုတှလေုပျဖို့ အမြားကွီးမြှျောလငျ့တယျ။ တကယျတော့ အရငျ ကုလသမဂ်ဂအထှထှေညေီလာခံမှာလညျး အလားတူဆုံးဖွတျခကျြမြိုး မနှဈ နှဈလညျတုံးက ဆုံးဖွတျခဲ့တုံးက ဆားဗီးယားနိုငျငံ က ထောကျခံခဲ့ပမေယျ လကျနကျရောငျးခမြှုတှရှေိခဲ့တယျလို့ စဈရေးအကဲခတျတှကေ ထောကျပွထားကွပါတယျခငျဗြာ။
EU အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ချက်ချင်းလက်ခံဖို့ ယူကရိန်းလျှောက်ထား
ယူကရိန်းကို စစ်လက်နက်ထောက်ပံ့ဖို့ အီးယူ ဆုံးဖြတ်